http://adf.ly ​မှ Download ​ချ​နည်း ~ ညီနေမင်း ( နည်းပညာ )
http://adf.ly ​မှ Download ​ချ​နည်း
​ကျွန်​တော် ​နောက်​ဆို​ရင် http://adf.ly/ ​ဆိုက်​က​နေ link ​တွေ​ကို ​ချိတ်​ပေး​သွား​မှာ​ဖြစ်​ပါ​တယ် . ​ဘယ်​လို​မျိုး Download ​ချ​ရ​မ​လဲ​ဆို​ရင်​တော့ ​လွယ်​ပါ​တယ် . link ​တစ်​ခု​ရ​လာ​ပြီ​ဆို​ရင် ​အဲ့​ဒီ့ webpage ​ရဲ့ ​ညာ​ဖက်​အ​ပေါ်​မှာ ​ပုံ​ထဲ​က​ပြ​ထား​တဲ့​အ​တိုင်း SKIP AD ​ဆို​တဲ့ ​အ​ဝါ​ရောင်​စာ​သား ​လေး​ကို ​နှိပ်​ပေး​လိုက်​တာ​နဲ့ Download ​လုပ်​ရ​မယ့် ​ဆိုက်​ကို ​ရောက်​သွား​ပါ​လိမ့်​မယ် . ​အား​လုံး​ပဲ ​အ​ဆင်​ပြေ​ပါ​စေ​လို့ ​မျှော်​လင့်​မိ​ပါ​တယ် . (​ပုံ​ကြီး​ချင်​လျှင် ​က​လစ်​နှိပ်​ပါ)
​အောင်​ကျော်​ကျော်​ဝင်း March 28, 2012 at 4:09 AM
Htoo Htet January 31, 2014 at 2:36 PM
​အ​ကို​ရေ ​နည်း​ပ​ညာ​လေး​ဘာ​လေး​များ​နောက်​ထက်​နောက်​ထက် ​အ​သစ်​သေး​များ​ပေါ့ ​ဗျာ ​ရ​ခဲ့​ရင် htoohtet235@gmail.com ​ကို ​ပို့​ပေး​ပါ​နော် ​ကျေး​ဇူး​တင်​ပါ​တယ်
Htoo Htet January 31, 2014 at 2:38 PM
Photoshop ​နဲ​ပတ်​သတ်​တဲံ့​ဟာ​လေး​တွေ​လဲ ​ပေး​ပါ​နော်